BackGround History » Technological University (Lashio)
Motto ,Vision ,Missions & Quality Objectives
Ongoing Short-term and Long-term Plans
Joint-venture with International Organizations
ME(Master of Engineering)
Technological University (Lashio) was firstly established as Government Technical Institute (GTI) under the Ministry of Science and Technology on 27 December 1999.It was situated in Ward (12) near AT Pagoda,5miles away from Lashio.
On 10 September 2010, it was upgraded to Government Technical College (GTC) in the same campus.The main building of T.U (Lashio) was built in the east of Lashio-Theinni Highway, near Ho-Paik village,7miles away from Lashio on5May 2005. It took about two years to complete.
On 20 January 2007, it was promoted to Technological University (Lashio) in the campus of GTC. In the same year of 1 July, it was moved to newly-built three-storey structure in the new campus located7miles northeast of Lashio.
၁၉၉၉ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့တွင်အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (GTI) ကျောင်းအဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (GTC) အဖြစ်သို့ တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့ တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လားရှိုး) အဖြစ်သို့ အဆင့်တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လားရှိုး)ကျောင်းတော်ကြီးကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မေလ (၅)ရက်နေ့တွင်စတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့တွင်အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။